Maraykanka: Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dambiyo lagu helay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaraykanka: Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dambiyo lagu helay
June 4, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Dacwad loo haystay wiilal Soomaaliyeed, ayaa go’aan kama dambays ah laga gaaray, waxaana lagu helay dhammaan dambiyadii loo haystay kadib markii gacanta loo gashay kiiskooda Xeerbeegtida dalka Maraykanka.
Kiiska wiilashan, ayaa muddo badan 14 cisho ka socotay maxkamad ku taalla Minnesota, waxaana dood iyo cadaymo kadib loo gudbiyay xeerbeegtida dalkaas oo loo qaybtay inay kiiskan kusoo afmeeraan muddo 2 casho ah.
Xeerbeegtidii Minnesota ee gacanta ku hayay kiiska seddexda wiil, ayaa sheegtay in dhammaan dambiyadii cuslaa ee lagu soo eedeeyay dhalinyaradaasi lagu heley.
Dhalinyaradan kala ah; Guuleed Cumar, Cabdiraxmaan Daa’uud iyo Maxamed Faarax, ayaa lagu eedeeyay inay qorshaynayeen dilal ay ka gaystaan meelo ka baxsan dalkaasi, sidoo kale waxaa lagu soo dacweeyay inay rabeen ku biirista kooxda Daacish.
Qaadiga ugu sarreya maxkamadda, ayaa hadda leh go’aanka ugu dambeeya, wuxuuna awood u leeyahay inuu khafiifiyo ciqaabta dambiyada lagu helay oo gaarsiisan xabsi da’im.
Qaar kami ah waalidiinta dhashay wiilasha la maxkamadeeyay ayaa ku dooday inaan si cadaalad ah loo marin kiisaska carruurtooda, waxayna tilmaameen inaan sifo sharxi ah loo marin qaadista kiiska wiilashooda.
Qaabkan hoose ayaa dambiyada wiilasha Soomaaliyeed loo cadeeyay;
Maxamed Faarax waxaa lagu helay inuu galay dhamaan dambiyada lagu soo eedeeyey oo ahaa inuu doonayey inuu ku biiro ISIS iyo inuu dibedda ka gaysto dil, been abuur iyo inuu FBI been u sheegay.
Guuleed Cali Cumar waxaa lagu helay inuu galay dhamaan dambiyada lagu soo eedeeyey oo ahaa inuu doonayey inuu ku biiro ISIS iyo inuu dibedda ka gaysto dil, iyo ku takri-fal deeq waxbarasho.
Cabdiraxmaan Daauud waxaa lagu helay inuu galay dambiyada lagu soo eedeeyey oo ahaa inuu doonayey inuu ku biiro ISIS iyo inuu dibedda ka gaysto dil, waxaase lagu waayey inuu sameeyey been abuur.
Maaha markii ugu horraysay dambi lagu helay wiilal Soomaaliyeed, balse waxay kusoo beegmaysa xilli dhalinyaro badan ku biireen kooxda Daacish.
December 22, 2016 14 askari oo Turki ah oo lagu dilay dagaal dhexmaray maleeshiyada ISIS oo ka dhacay gudaha Suuriya
August 13, 2016 Masuuliyiinta magaalooyinka Minneapolis iyo Boosaaso oo kala saxiixday heshiiska mataanaynta labada magaalo
October 19, 2017 Duqa Muqdisho oo sheegay in Isgoyska Zoobe loo bixiyay ’14 Oktoobar’ si loogu xasuusto dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay halkaas
Madaxweynaha Puntland oo ku wajahan ee Imaaraatka Carabta
Madaxweyne Cabdiweli oo magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka baarlamaanka
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ku dhawaaqay guddiga xalinta khilaafaadka baarlamaanka, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada maanta oo Isniin ah. Magacyada guddiga: 1.Caaqil Cismaan Ismaaciil Barre 2.Maxamed Cabdikariim Maxamuud 3.Burhaan [...]